News | Tag: bollywood
जब यी बलिउड कलाकारहरु कंगाल बने...
कस्तो छ बलिउडका चर्चित कलाकारहरुको सौतनी भाइ-बहिनीसँगको सम्बन्ध ?
बलिउडमा अनमोल केसीको स्टारडम बिक्ला ?
काठमाडौं । नेपाली युवा स्टार नायक अनमोल केसीले बलिउड फिल्म खेल्ने भएपछि उनको चर्चा पुनः चुलिएको छ । बुधबार भारतीय दैनिक पत्रिका ‘हमरा महानगर’ले अनमोलको बलिउड डेब्युबारे समाचार नै प्रकाशित गरेपछि उनको चर्चा लुलिएको हो ।
विवाहपछि अभिनय छाडेका यी बलिउड अभिनेत्रीहरु
बलिउडका थुप्रै चर्चित अभिनेत्रीहरुले विवाहपछि फिल्मी करिअर छोडेका छन् । विभिन्न कारणले उनीहरु अभिनयबाट बाहिरिएका हुन् ।